“GF” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေး သင့်ချစ်သူသိပါစေ......... - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
“GF” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေး သင့်ချစ်သူသိပါစေ.........
Posted by MAY on September 11, 2012 at 11:30am
" GF " ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေး သင့်ချစ်သူသိပါစေ....
ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်..။
သူတို့နှစ်ယောက် ခင်မင်သွားပြီး မကြာမီမှာ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကိုပြောတယ်။
"ကောင်မလေးရေ GF ဆိုတာ ဘာလဲသိလား" တဲ့..
ကောင်မလေးက ခဏကြောင်သွားတယ်... ပြီးတော့ .... "မသိဘူးလေ အဲတာဘာလဲ" လို့
"GF ဆိုတာ Good Friend" ပါတဲ့...။
အဲအခါမှာ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ထပ်မေးတယ်..။
"GF ဆိုတာ ဘာလဲ ခုသိပြီလား" တဲ့..
ကောင်မလေးက နားမလည်ဟန်နဲ့ ခေါင်းခါပြတယ်..
"GF ဆိုတာ Girlfriend" ပါတဲ့...။
အဲဒီနောက် လက်ထပ်ကာနီးမှာ ကောင်လေးက ထပ်မေးတယ်...
"GF ဆိုတာ သိပြီလား ချစ်သူ" တဲ့..
ကောင်မလေးက ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ "Girlfriend" လေလို့ဖြေတယ်...
ကောင်လေးက ကောင်မလေးလက်ကို ကြင်ကြင်နာနာဆုပ်ကိုင်ရင်း ပြန်ပြောတယ်...
"မဟုတ်ဘူး GF ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်မင်းဟာ “Great Future" ပါတဲ့...။
အဲဒီလိုနဲ့ လက်ထပ်ပြီးလို့ ကလေးတွေရလာတော့..ယောင်္ကျားဖြစ်သူက မိန်းမကို မေးတယ်...
"မိန်းမရေ GF ဆိုတာ ဘာလဲကွယ်"
မိန်းမက "ဒီတခါ ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ ယောင်္ကျားရေ" လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်..
ယောင်္ကျားက ကလေးလေးကို ချီရင်း မိန်းမပခုံးလေးကို ဖက်လို့
"GF ဆိုတာ Gleeful Family” ပါလို့ ဖြေလိုက်တယ်...။
အဲဒီနောက် သားသမီးတွေလည်း အိမ်ထောင်ကျ သူတို့နှစ်ယောက်လည်း အိုမင်းလာကြတာပေါ့....
အဲဒီအခါမှာ အဘိုးကြီးက အဘွားကြီးကို မေးတယ်..
"အဘွားကြီးရေ GF ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲကွယ်" လို့မေးလိုက်တယ်...
"ပြောပါအုံး အဘိုးကြီးရယ်" လို့ အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ပြန်ပြောတယ်...
အဘိုးကြီးက အဘွားကြီး နဖူးလေးကို ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းရင်း
"အဘွားကြီးက အဘိုးကြီးအတွက် “Girl Forever ပေါ့ကွယ်" လို့ ဖြေလိုက်ပါတော့တယ် ....
Tags: ရသ Like 25 members like this
Comment by Zarni on October 2, 2012 at 10:32am မိုက်တယ်ကွာ Comment by kay thwe aye on September 25, 2012 at 4:29pm အဲ့လိုဆိုကောင်းမှာပဲနော် Comment by khinthitthitoo on September 25, 2012 at 9:50am အင်း အဲဒီလိုမျိုး ချစ်သူတစ်ယောက်ရမယ်ဆိုရင် ဒီဘ၀သေပျော်ပါပြီ
Comment by အေးသီတာ on September 24, 2012 at 4:39pm အ၇မ်းကောင်းပါတယ် Comment by warwarcho on September 24, 2012 at 1:43pm အရမ်းကောင်းပါတယ်..... Comment by suai on September 23, 2012 at 4:45am I am so happy Comment by မိုးလေး on September 18, 2012 at 5:15pm မိုက်တယ် Comment by ပန်းသီး on September 16, 2012 at 6:24pm ဘိုးကြိးဘွားကြီးကျရင်တော့အဲလိုဟုတ်လို့လား Comment by nan mokhan on September 16, 2012 at 5:52pm THANKS Comment by ထွဏ်းထွဏ်းထိုက် on September 16, 2012 at 5:47am ကျနော်လဲအဲလိုပြောဖို့ (GF)လေးရှာလိုက်အုံးမယ် .............p) ‹ နောက်သို့